तपाईको आज कस्तो छ ? – हेर्नुहोस् ज्येष्ठ १ गतेको राशिफल « Channel Np
तपाईको आज कस्तो छ ? – हेर्नुहोस् ज्येष्ठ १ गतेको राशिफल
प्रकाशित मिति : Wednesday, May 15th, 2019 at 3:32 AM
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल ज्येष्ठ १ गते बुधबार इश्वी सन् २०१९ मे १५ तारीख वैशाख शुक्लपक्ष दशमी तिथी उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र बरीयान योग बव करण चन्द्रमा कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध योग सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ संक्रान्ति मोहिनी एकादशी व्रत अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस – ज्योपं. सरोज घिमिरे /
स्वास्थका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यतिmहरुबाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ । प्रतिश्पर्दिहरुको बृद्धिहुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुनसक्नेछ । भोगबिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला ।
आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक कार्यमा जुट्नाले मनग्य आम्दानि हुने समय रहेकोछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ सहयोगमा बृद्धिहुने समय रहेकोछ ।
पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको सामना गर्नुपर्नेछ । ब्यपार ब्यवसाय मध्यम रहने समय रहेकोछ ।
बल तथा प्रराक्रममा बृद्धिहुने समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरुको स्वास्थमा सामान्य तनाब रहनेछ ।
खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीका कारण आफन्तजनहरु बिच मनमुटाबको सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । साथिभाईहरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ ।
भौतिक शुःख साधन प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ । समय राम्रो रहेको छ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ ।
प्रेमी प्रेमीका बिच मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । खर्च बढ्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । कुराकाट्ने हरुको बृद्धि हुनेछ । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ ।
मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या रहला । बिद्या तथा ब्यापारको राम्रो योग रहेको छ । बोलिको खराब अर्थ लाग्नाले सामान्य झन्झट आईपर्ला । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ ।
पारीवार तथा ईष्टमित्र सगँको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ ।
आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्रा रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ ।
बोलिको कारण साधारण समस्या आउन सक्नेछ । चिसो सम्बन्धी समस्या सताउला । स्तान्तरण को योग रहको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ ।
ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मित्रजनहरु बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहने छ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ ।